कसरी एक ट्रांसफर्मर आकर्षित गर्न? यी प्रतिष्ठित वर्ण प्रेम जो कोहीले लागि धेरै रोचक प्रश्न।
अर्को ग्रह देखि पृथ्वी आइपुगे जो असामान्य प्राणीहरू, - ट्रान्सफर्मर। एक हाम्रो ग्रह को विनाश को एक मिसन, र अन्य संग - उनको बचत गर्न। यी रोचक प्राणीहरू मध्य-20 औं शताब्दीमा सिर्जना र चाँडै संसारभरि लोकप्रियता प्राप्त गरियो। सबै बच्चाहरु र किशोरों तिनीहरूलाई साथ बढ्दै छ, र लामो युवा को सीमा पार गर्ने ती, तिनीहरूले साहसिक को आफ्नो अविश्वसनीय संसारमा उहाँलाई लालच कसरी सम्झनुहुन्छ। सिनेमाहरू आज पहिले नै सुरु दुई श्रृंखला ट्रान्सफर्मर अद्यावधिक र तेस्रो उपज आशा छ। को ट्रान्सफर्मर चलचित्र तस्बिरहरू तिनीहरूले हरेक विवरण हेर्न भनेर ठूलो निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। निस्सन्देह, यो अघि, हामी तपाईंलाई जटिल मिसिन को कौशल देखाउन सक्छौं र हिंड्न छैन, तर कसरी सबै को शक्ति अन्तर्गत सामान्य तरिकामा तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न सिक्न।
त्यसैले, कसरी एक ट्रांसफर्मर आकर्षित गर्न? एकदम बस, तपाईं कुरा गम्भीर लाग्न भने। प्रसन्न - पनि यी मिसिन को संरचना को जटिलता यद्यपि, तिनीहरूलाई रंग। तपाईं आफ्नो भविष्य ट्रांसफर्मर को आकार अर्थात् कोर्न गर्न, आवश्यक सबै को पहिलो। ती repelled गरिनेछ। धेरै नेत्रहीन समकोणहरू र वर्गहरूको संग जोडिएको ट्रांसफर्मर मा भविष्यमा संरचना विभाजन - यो एक ट्रांसफर्मर आकर्षित गर्न कसरी दोस्रो संस्करण हो। दोस्रो चरणमा हामी बस विवरण आकार, बाहिर सबै disadvantageous तेज किनाराको चौरसाई। मुख्य सर्किट प्राप्त गरेपछि बिस्तारै विस्तार रेखाचित्र गर्न थाल्छन्। तपाईं आफैलाई आफ्नो व्यक्तिगत हतियार र उपकरण मार्फत सोच, अद्वितीय नजर आफ्नो ट्रान्सफर्मर दिन। निस्सन्देह, यदि यो ट्रान्सफर्मर अप्टिमस प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै पनि पहिले नै ज्ञात विश्वव्यापी चरित्र छैन।
यदि यति, र तपाईं अवस्थित ट्रांसफर्मर कोर्नुहोस् चाहनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले पहिला भन्दा expressive विवरण गम्भीर विचार छ। किनभने तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै अद्वितीय क्षमता र बाह्य विवरण छ। भमरा ट्रान्सफर्मर पहेंलो चित्रित छन्, त्यसैले तिनीहरू कुनै पनि अन्य संग छैन भ्रमित गर्न सकिन्छ। तपाईं पहिले नै आधारभूत विवरण बाहिर स्केच हुँदा तपाईंको रेखाचित्र अन्तिम चरणमा, तपाईं रंग गर्नुपर्छ र कोरिएको वर्ण र इच्छित छाया थप्नुहोस्। पछि मात्र चित्रमा वर्ण जीवित र सारा हेर्न गर्नेछ। कि अप्टिमस प्रधानमन्त्री ट्रान्सफर्मर बाँकी भिन्न मान? यो सबै, लम्बी कान र एउटा विशेष रंग को पहिलो छ। बारी मा Decepticons, गंभीर द्वारा प्रतिष्ठित छ अनुहार सुविधाहरू र विस्तार को एक विशाल राशि। लगभग तिनीहरूलाई सबै Autobots गर्न यसको विपरीत, गाढा टोन मा चित्रित छन्।
इन्टरनेटमा एक विशाल एक ट्रांसफर्मर आकर्षित गर्न कसरी एक विस्तृत विवरण दिन्छ जो, स्रोतहरू संख्या छन्। पनि पूरक सामाग्री पाउन सकिन्छ जो फिलिम, लागि स्केचहरू र storyboards सम्म। पंथ animated श्रृंखला र चलचित्र सबै मुख्य वर्ण आफ्नो व्यक्तिगत गुण र विशेषताहरु, जो ट्रांसफार्मर कस्तो अनुमान गर्न चाँडै र सही हुन सक्छ द्वारा प्रतिष्ठित छन्। प्रत्येक कलाकार प्राविधिक उपकरणहरू आकर्षित भनेर किनभने भागहरु को ठूलो संख्या धेरै गाह्रो छ भन्नेछु। तर, यो के गर्न, पनि सबैभन्दा अनुभवहीन व्यक्ति मात्र लगनशील भई लागिरहेमा र कल्पना आवश्यक छ।
Somov Konstantin Andreyevich कलाकार: जीवनी, रचनात्मकता
Vizin सफा टियर
Kalanchoe: हेरविचार र थुनामा को अवस्था